Ungawungenisa njani umhlaba we-3D ukusuka kuGoogle Earth uye kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukungenisa i-3D Surface ukusuka kwi-Google Earth ukuya kwi-AutoCAD
Sasivame ukuthetha ngendlela ukungenisa umfanekiso Ukusuka kwiGoogle Earth ukuya kwi-AutoCAD ngoku makhe sibone indlela yokungenisa ngayo umgangatho kwaye wenze lo mfanekiso unemibala kwaye unokuzingela kule ndawo 3D.
Iqhinga lifana esizibonayo nge-Microstation, ukudala izinto kunye nokuxazulula ingxaki yokuba umfanekiso usegreyini.
1 Khetha umfanekiso kwiGoogle Earth
Kuyafuneka ukuba uvule uGoogle Earth, ucime umhlaba, ikhampasi yasemantla kunye nembono ye-orthogonal. Indlela ebhetele esinayo, sinokufumana isisombululo esingcono, njengoko besitshilo kwisithuba esedlule.
2 Ngenisa intsimbi ye-3D
Xa uvula i-AutoCAD, akufanele unciphise iWindowsEarth iwindi, ungayifaki, kodwa gcina umbono ophezulu owufunayo.
Emva koko sivula i icon eboniswe ekunene, ngomyalelo wombhalo "ImportGEMesh"
Kwimeko Map3D AutoCAD okanye AutoCAD 3D Civil, umnatha phakathi hunt georeferenced buncedisana ibhokisi Google Earth (ngaphandle inkqubo projektha ukuzoba ezisetyenziswa ngayo ichaziwe) kunye nomfanekiso uzingela kule bhokisi.
Ukuba awunayo nayiphi na inkqubo emibini edlulileyo, kodwa i-AutoCAD kuphela, okanye i-Architectural, ukhetho lokubonisa ikona elingezantsi lasekhohlo liza kwenziwa kwaye ifayile iya kufakwa kunye neeyunithi zokulinganisa kumnatha (i-3D mesh) ye-32 ngama-32 izikwere . Inkqubo iyakukucela kwangoko iikona zomfanekiso kunye nokujikeleza.
3 Jonga umboniso umfanekiso
Ukuba into oyifunayo kukubona umfanekiso obanjwe kumphezulu, khetha ukhetho "lokwenene" kwiqela lenjongo "yemodeli ye-3D".
Emva koko ukhethe ezinye iimbono eziququzelela ukubonakala kwe-isometric.
4 Ukubeka umfanekiso ngombala
Nangona umfanekiso ungeniswa kwi-grayscale, ngenxa yobubi beGoogle, ukuba usebenzisa ubuqili bokuguqula umfanekiso ube yizinto eziphathekayo ungayifumana ngemibala njengoko kuboniswe kumanyathelo alandelayo:
Kulo mfanekiso oboniswe kwiGoogle Earth, silondoloza ngefayile yokukhetha / ugcine / ugcine umfanekiso
Emva koko ku-AutoCAD, kwipaneli yezinto eziphathekayo, sibela umfanekiso njengento
Kwiiyunithi zokulinganisa sinikezela ukuba zifanelane (ezifanelekileyo ukuya kwi-gizmo)
Kukhetho lwe-mosaic (U tile, V tile) sinika i-1
Kukhetho olukhethwe phakathi kwemifanekiso yomfanekiso (u-offset, V offset) sinika i-0
Ekujikelezweni sikwabela i-0 Ngoku sabela loo mathiriyeli kumnatha ngokusebenzisa "imephu yezinto" umyalelo kunye nokhetho lwe "planar" Kwaye yiyo loo nto, sitshintsha indlela ukusuka "kwimbono yokwenyani ye-3D" ukuya kwimo yomthunzi (i-shademode)
5 Ukufaka ukongezwa
Ukufakela le sicelo kufuneka ukhuphe ukusuka kwiphepha leelebhu ze-AutoDesk. Nje ukuba ifayile ivulwe, iyenziwa kwaye indlela yokufaka yohlobo lwe-AutoCAD kufuneka ikhethwe apho sifuna ukufakelwa khona, kwimeko yokuba nenkqubo engaphezulu kwesinye, kufuneka kwenziwe ufakelo ngalunye.
Nangona yinkqubo egunyazisiweyo nguGoogle Earh, umfanekiso ufika kwisilinganiselo esibuGrey kwaye ingekho umbala, ngamalungiselelo kaGoogle.
Kwimeko ye-AutoCAD Civil 3D 2012 kunye ne-2011 sele idityanisiwe. Ukuba awunayo i-Civil3D, ungayenza nge Plex.Earth add-on
I-AutoCAD Imephu AutoDesk 3D civil Umhlaba ka-Google
Umbhali oPhila, ngenxa yeeblogi ezinqanyuliweyo
Uchanekile, i-AutoDesk yiphambukisile ukususela ngexesha liqalise i-AutoCAD 2013, kuba ukusebenzisana neGoogle Earth kwalahlekelwa inkxaso.
Ukubandakanya i-Civil3D i-2013 ayisekho inkqubo yokungenisa imodeli yedijithali kunye nomfanekiso wesathelayithi kwiGoogle Earth.
Musa ukukhuphela ikhontikisi ye-autodesk oyithumele yona
Umhlobo ogqwesileyo ndifumene apho imifanekiso ikhona.
Khangela indlela, ndiyaqonda ukuba xa ikhutshwe, sele igcinwe kwindawo enye.
Hlola umphathi we-raster
Ndiyifake umfanekiso weGoogle emhlabeni kwi-civil cad, njengoko ndenzayo ukugcina lo mfanekiso kwi-Civil cad, esebenza kwi-Microstation le nto ilula kakhulu.
Sawubona, umbuzo wam kukuba ndifumene i-AutoCAD 2009 kwaye xa ndifaka umgca wemiyalelo I-ImportGEMesh indixelela ukuba umyalelo awuyazi. Ndikulindele impendulo yakho, mbulela kakhulu!
Uhlobo "imodemode" ngumyalelo oza kukuvumela ukuba ukhethe phakathi kweentlobo ezininzi zokubonwayo phakathi kwazo "eziyinyani"
Molo, inqaku lakho linomdla kakhulu, kodwa ndikubuza umbuzo, ungakhankanya kwinqaku lesi-3 ukuba ufika njani kwimbonakalo yobeko? ungazicacisa ngakumbi, ndizama ukufunda eli candelo lemodeli, ke ezinye izinto mhlawumbi ezisisiseko kuwe, azaziwa kum.-
Siyabulela kunye nesikhwama
Iinkonzo zeGIS uthi:
Susa ulwazi ... Siyabonga ngokubelana ngesithuba esihle ..
Kukho iindlela eziliqela, kwimeko yesimo seSpot, kwiGoogle Earth, sebenzisa umgca kwesinye sekhohlo.
Oku kusebenze ukukhutshwa kweemifanekiso ezikhoyo, ukuba ucofa kwibhola ephakathi, iinkcukacha zomfanekiso zivela kunye nekhonkco ukuzithenga kwi-intanethi
Kwimeko yomfanekiso weDaily Globe umfanekiso, unokukwenza kule ndlela
apho ungakhetha indlela, uhlobo lomfanekiso onomdla kuwe kwaye xa ulungile usebenzisa iqhosha lokuthenga kwiqhosha elithi "odolo yeefayile okanye ushicilelo"
apho ungakhetha indlela, uhlobo lomfanekiso onomdla kuyo kwaye xa ulungele usebenzise inkinobho yokuthenga.
Ndingayithenga njani (ukuthenga) umfanekiso wesathelayithi wendawo yam, nceda undixelele nceda.
Iposi elihle, sizame.